Joint ngobukhulu e enkulu yomzimba womuntu yakhiwa kwedolo. Ukwephula umsebenzi wakhe ephelezelwa ubuhlungu obunzima. Kwezinye izimo, izinkinga ababa nazo kwedolo ngokuhlanganyela ikani futhi ingabe bungaholela ekukhubazekeni. Emuva ekuphileni okuvamile uma kwenzeka leso sifo ngeke arthroplasty. Ngakho ngokuthi ukusebenza ku Ukushintshwa kwamajoyinti omzimba nge nolwelwesi yokufakelwa.
It bafeza kokungenela kuhlinzwa Yiqiniso, kuphela njengesixazululo sokugcina uma ezinye izindlela ukufeza ngcono akunakwenzeka. Ngokuvamile, yenzeka i ngokuhlanganyela yokufakelwa Kunenkolelo nge:
ukusonteka enamandla kwamadolo;
Isikhathi esining impela inkomba arthroplasty kuyinto yokuguga. Iqiniso liwukuthi kulo lonke ekuphileni zezinyawo ezingabantu ngaphansi imithwalo esindayo njalo. Ngakho-ke, ukugqoka kwedolo. Njengoba ezothatha isikhundla ngokuvamile kakhulu ezidingekayo maqondana ukuthuthukiswa osteoarthritis.
izinhlobo emkhakheni wezitho zokwenziwa
Kuye izinga lomonakalo ngokuhlanganyela phakathi nokuhlinzwa engenziwa:
Ukufaka eyodwa emaceleni sokwenziwa beya. Le nqubo okuboniswe lapho umonakalo kukhawulwe Ezansi noma engenhla ngokuhlanganyela.
Yenzeka we wokufakelwa yokunyathelisa. eyohlinzwa okunjalo inikezwa iziguli umsipha ukungazinzi. sokwenziwa rotary is kuvikelwe usebenzisa ekhethekile ductile polymer usimende.
Ukubeka surface esikhundleni. I sokwenziwa kwalesi silwane ingenisa esikhundleni uqwanga articular kwenzeka ukuthi lilimele.
Ukufakwa lomnyango sokwenziwa. Isiguli ezifakelwa design akhethekile, senziwe eksisi fomu.
On uhlobo sokwenziwa ngokwezinga elikhulu kuzoncika impendulo yombuzo ukuthi kubiza malini amadolo esikhundleni. Yiqiniso, ukufakwa nolwelwesi sohlangothi olulodwa ushibhile kuno, isibonelo, inguqulo okushiwo. Kwezinye izimo, Ukushintshwa kwamajoyinti omzimba engenziwa usebenzisa lokufakelwa kwezitho ezikhethekile ezenziwe ngamunye ukuhlolwa laboratory kanye izilinganiso.
Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi ukulungiswa ukuhlinzwa
Endoprosthesis - inqubo ngempela olinde eziyinkimbinkimbi. Isiguli kufanele uqale ahlolwe ngokugcwele wezokwelapha. Okokuqala, kuthatha udokotela. ukunakekelwa ngokukhethekile Uchwepheshe uhlola Yiqiniso, joint kwedolo. Njengoba ezothatha isikhundla nganoma iyiphi indlela - impela kokungenela sina emzimbeni. Ngakho-ke, ekulungiseleleni le nqubo kumele kwenziwe ngokucophelela. Ngemva ukuhlola isiguli zithathwa lonke uvivinyo ezidingekayo. Uma kunesimo esiphuthumayo, iziguli eziningi futhi babe abanikeli ngokwabo. Okungukuthi, nika igazi, okungase kudingeke ngesikhathi ukusebenza.
Kuphoqelekile esikhathini wokulungiselela futhi ngaba ukulungiswa ingqikithi emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, isiguli ithunyelwa wamazinyo. Iqiniso lokuthi amagciwane abahlala akhulunywayo lingene egazini futhi uphumule umzimba ngaphambi kokuhlinzwa. Futhi lokho kungaholela zonke izinhlobo ukuxakeka.
On udokotela ucela isiguli ngempela konke kubo ukuthatha imithi. Iqiniso lokuthi ezinye izidakamizwa kungabangela ukopha lapho kuhlinzwa. Ngaphezu kwalokho, iziguli ngezinye izikhathi belulekwa ukuba unciphise umzimba futhi ukuyeka ukubhema.
Yiqiniso, ukwenza wokufakelwa amadolo ngokuhlanganyela akunakwenzeka kuzo zonke iziguli. Izimo kukhona kulokhu:
ezinye izinhlobo izifo ukuphathwa kwabathintwayo;
Ezinye kugula ngokwengqondo;
Njengoba ukusebenza wenziwa
Empeleni yena arthroplasty Inqubo kanje:
Isiguli yenzani izinto zokubulala izinzwa.
ngokuhlanganyela bakhathale noma ingxenye yalo isusiwe esebenzisa amathuluzi akhethekile wezokwelapha.
amahora amabili - mayelana njengoba isikhathi esiningi liyadingeka ochwepheshe ukuze ufake i yokufakelwa amadolo ngokuhlanganyela. Njengoba ezothatha isikhundla ihlala impela isikhathi eside, ngoba udokotela ohlinzayo oludingwa kakhulu ngokucophelela futhi kancane, bit by bit ukususa ithambo. Ngemva kokuhlinzwa kuvalwe nesineke ibekwa ICU. Lapha, isiguli kufanele lube ngaphambili sokuthola izinto zokubulala izinzwa. Sonke leso sikhathi uhlala ngaphansi kweso lwezokwelapha. Uma kube nezinkinga kungukuthi waphawula, isiguli idluliselwe esigcemeni jikelele.
Ukutheleleka - omunye izinkinga ezingase ezenzeka ngemva amadolo esikhundleni wenziwa. Ngemva kokuhlinzwa, ukugwema lokhu, iziguli akhishwe ngemithi elwa namagciwane. Ngosuku lwesibili eziqhutshwa Physiotherapy enqunyiwe. Buciko umzimba ezilula, isiguli kakhulu ukusheshisa nokuvuselelwa yayo.
Ikhaya nesineke ngokuvamile kukhishelwa phezu 7-14 ngosuku. Ngaphezu kwalokho inqubo nokuvuselelwa kuthatha cishe 10 amasonto. Uma umsebenzi lesiguli awahlobene umsebenzi ngokomzimba, phindela ke, ayengakwenza ngenyanga. Thola beshayela imoto ovunyelwe cishe 4-6 amasonto emva hip esikhundleni. Esimweni lapho ekusebenzeni amadolo esikhundleni kwaba yimpumelelo futhi isiguli uzizwa emihle, akukho izinyathelo ezikhethekile kuthathwe ukubuyisela akudingekile. Nokho, lokho okutuswa kadokotela ukuhambisana nayo yonke adingekayo:
Umlenze noma kunjalo ayikwazi zigcwale ngokweqile. Kungenjalo, ingase sokwenziwa ezilimele futhi kudingeka ukulishintsha futhi. ukusebenza okuphindiwe ngowokuqala ngokuvamile kunzima.
Awukwazi sihlanganyele emidlalweni asebenzayo.
Udinga ubukeza ekudleni kwakho. Ukudla ngesikhathi nokuvuselelwa kufanele abe olinganiselayo.
Ukuvuselelwa emva kwedolo Ukushintshwa kwamajoyinti omzimba kuhilela kuhlanganise kanye nokuvuselelwa umzimba ekhaya.
Esikhathini esithile ngemva kokuhlinzwa, iziguli ukuzwa kabi kwedolo. Ngakho-ke, baqokwa amaphilisi ezinhlungu, okuyinto okudingeka zithathwe.
Kungakanani udinga ukukhokha ukuze uthole entsha yokufakelwa amadolo ngokuhlanganyela? Esikhundleni sale ingxenye yomzimba - kunemidanti Yiqiniso, ezibizayo. Okokuqala, intengo kuthinta yinkimbinkimbi ukusebenza. Futhi, izindleko sokwenziwa incike uhlobo sokwenziwa. Yiqiniso, ukuze ulondoloze ku esibalulekile enjalo akudingekile. Modern amadolo sokwenziwa zingenziwa ngezinto ezahlukene: Alloys yezokwelapha ekhethekile, polymers, izitsha zobumba. Okuwukuphela kwento le isikhathi eside kunazo zonke. ngokuhlanganyela bobumba ingahlala iminyaka engu-20. lokufakelwa kwezitho Ezivamile kufanele esikhundleni emva kweminyaka 10-15.
Ukuze nolwelwesi ngokwayo kuyodingeka bakhokhe ecishe ibe yizinkulungwane 140-150. Ruble. Mayelana 350-400 eziyinkulungwane. P. - ayelingana cishe okuningi eRussia amadolo esikhundleni. Intengo arthroplasty phesheya Yiqiniso, okuningi ephakeme. Ngokwesibonelo, kwa-Israyeli, izindleko zokuhlinzwa uqala kusuka ku-25 000 zamaRandi.
Amadolo yomiselela: Izibuyekezo nesineke
Abanye abantu abanalo ukholo kakhulu amathuba wokuphila emkhakheni wamuva wezokwelapha futhi bayabesaba tekuhambela inqubo efana arthroplasty ngokuhlanganyela. Futhi ngakho ngifuna lobuya abasebenzisi abangafuni anqume ukuba alale etafuleni yokusebenza. Ezimweni eziningi, abantu emalungeni yokufakelwa ukwenza Ukushintshwa kwamajoyinti omzimba uyayalwa. Ngaphezu kwalokho, ngokusho iningi, ungalibali ukusebenza. Uma udokotela wakho uncoma ke, kufanele uqale ukuqoqa imali.
Ngokuphathelene indawo yokusebenza, iningi leziguli bangaphambili bakwamukela kahle, hhayi kuphela kwi-imitholampilo zakwamanye amazwe, kodwa futhi mayelana isiRashiya sethu esingacacile. Ngo kuwebhu kukhona izikhundla ezithophayo laseNovosibirsk, eMoscow, Kurgan, nokunye. D. Surgery. ukunakekelwa Post-op, emakamelweni isimo, ukusuthisa ezibhedlela Russian - konke lokhu ezimweni eziningi, ngokuvumelana iziguli, kuyinto ezingeni elifanele. Ngokusho eziningi, kusimo eyinhloko nenqubo efana amadolo esikhundleni, - intengo. Yiqiniso, izinkulungwane 350. Ruble ngenxa yabaningi abadinga sokwenziwa ke kakhulu.
Kanjani ukuze uthole yokudluliselwa ukuhlinzwa
Yiqiniso, ukunikeza umbono isidingo ngokuhlanganyela esikhundleni inqubo may udokotela kuphela. imisebenzi enjalo kwenziwe yonke imizi yezwe. Umtholampilo nesineke ekhetha ngokuzimela. Udokotela ukuba khona ubhala isiqondiso kuphela. Yiqiniso, ukuze kuncishiswe izindleko ukukhetha esibhedlela eduze nasekhaya. Kodwa ungakwazi ukufunda izibuyekezo mayelana izikhungo ezihlukahlukene zezokwelapha futhi makudle ngcono.
Yiziphi izinkinga ezingadaleka lapho siqeda amadolo esikhundleni
Uma isiguli izohambisana nazo zonke izincomo udokotela ukuba khona, cishe emva kokuhlinzwa ngeke babe nanoma yiziphi izinkinga. Kodwa ngezinye izikhathi izinkinga musa kwenzeke. Njengoba sekushiwo, izinto eziningi iziguli zidlulile inqubo arthroplasty, wabhekana nezinkinga ezifana:
Ukuqala ukutheleleka, okungaba oyingozi noma ezingamahlalakhona. Lula noma ukuyeka ukuthuthukiswa yayo kungenzeka ngosizo antibiotic. Ngokuvamile, le nkinga kwenzeka kubantu abaphethwe i-rheumatoid arthritis kanye hormone ukuthatha. Kwezinye izimo, ungayeka ukuqhubeka ukutheleleka kuphela ngemva kokususwa ngokuhlanganyela otshaliwe.
Amahlule. Lena isimo esibucayi kakhulu, okusongela impilo isiguli egade iyokuhlinzwa nenqubo efana amadolo esikhundleni. Ukuvuselelwa leziguli ke ephelezelwa lokumamukela kuhlanganise anticoagulants. Phuza kufanele kube amasonto 2-3 emva sokwenziwa nakanjani. Lamabutho we thrombus kungaholela wahlaselwa isifo senhliziyo noma embolism yamaphaphu.
Yiqiniso, zikhona (siqala kancane) ingozi ukwenqaba sokwenziwa. Ngezinye izikhathi ngemva kokuhlinzwa, iziguli zibhekene nenkinga enjalo, njengoba patellar umsipha avulsion.
Endoprosthesis - ukubuyela ekuphileni okuvamile
Ukusebenza yokuqala esikhundleni amadolo phezu sokwenziwa senziwe phakathi nekhulu leminyaka eledlule. Ekuqaleni yezinkinga ezigulini babonakala impela njalo. Nokho, esikhathini sethu ka arthroplasty emitholampilo kakhulu kuba operation evamile nobuchwepheshe bayo, kanye nezindlela ukuvuselelwa nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa phelelisa kufike emniningwaneni wokugcina. Ngakho-ke, kanye nezinkinga ezigulini awavamile. Ngakho ngesaba ukuba alale etafuleni yokusebenza akudingekile.